Ma dooneysaa inaad wax dheeraad ah ka ogaato Wiki? - Weydii Khabiirka Cimilada
Wikipedia ama kaliya Wiki waa mid ka mid ah bogagga ugu caansan ee ugu caansan aduunka. Si ka duwan sida bogagga internetka, ma aha mid ka shaqeeya shirkad kasta oo casri ah laakiin ay ka mid yihiin ururinta hogaaminta ee mutadawiciinta kuwaas oo ka shaqeynayay astaamaha. Marar dhif ah ayay isku dayi doontaa waxyaabo cusub oo rajeynaya inay soo jiidato dad badan oo marti ah maalin kasta. Dhab ahaan, boggaan ayaa bedelay qadarka internetka wuxuuna leeyahay in ka badan toban bilyan oo bog oo ku qoran qaybta Ingiriisiga ee goobta - wieviel kostet eine umzugsfirma.
Oliver King, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiilka, wuxuu ku darayaa in marka dhacdooyinka qaarkood ay ka dhacaan adduunka, sida Boston Marathon, Wiki oo soo saara saacado gudahood. Maaddaama aysan jirin ilaha macluumaadka sida Wikipedia, adeegyo internet oo kala duwan iyo bogagba waxay ku tiirsan yihiin si ay u ururiyaan xogta. Haddii aad wax raadineyso Google ama Bing oo aad weydiisatid goobo sida Siri ah, waxaad heli doontaa kaliya warka macluumaadka, laakiin Wikipedia ayaa ku siinaya faahfaahin buuxda oo ku saabsan waxa socda adduunka
Si kastaba ha ahaatee, tabaruceyaashu abuuray mashruucaan waxay u baahan yihiin inay ka ilaaliyaan been-abuurka, wax-ka-qabashada, iyo kharribaadda..Laga soo bilaabo 2007, Wikipedia waxaa ku dhacay sheekooyin been ah, ka qaybgalayaasha kala duwanna ma awoodaan inay hagaajiyaan cilladaha ku haya meeshan si ay ugu noqdaan kan ugu fiican ee ugu sarreeya caalamka. Dhibaatooyinka ugu caansan Wikipedia waxaa ku jira qoraalladeeda bogagga Pokemon iyo porno. Waxay xitaa leedahay boggeeda bogagga dhedigga ah ee dumarka iyo goobaha aan sharci ahayn ee kharash kasta. Waxaa la rumeysan yahay in ka badan sagaal boqolkiiba dadka ka shaqeeya goobta ay ka mid yihiin shirkadaha shaki laga qabo iyo waxay ka hortagaan dadka cusub ee laga yaabo in ay xiiseynayaan waxyaabaha Wikipedia ah.
The Foundation Wikipedia ayaa dhawaan bilaabay howlgalkii samatabbixinta oo aan ka dalban karin mutadawiciinta inay beddelaan sida ay u shaqeeyaan. Iyadoo aan loo eegin dhammaan dhibaatooyinkan, isticmaalayaashu wali waxay aaminsan yihiin in Wikipedia uu yahay ilaha macluumaadka ugu fiican iyo goobta wuxuu ku xiran yahay tafatirayaasha kala duwan iyo ardayda doonaya inay wax ka raadsadaan mashaariicdooda ama shaqooyinkooda. Ansixinta Britannica waxay ku kacaysaa illaa $ 70 sanadkiiba si loo helo internetka in ka badan 120,000 oo maqaalo waxayna soo bandhigaan qoraallo lacag la'aan ah oo ay ku jiraan xayeysiisyo badan iyo xayeysiin. Dhinaca kale, Wiki ma xanuujiso isticmaalayaasheeda leh xayeysiisyo badan oo banner iyo pop-ups. Markii websaydhkii la bilaabay 2001-kii, ma aysan qorshaynaynin ilaha macluumaadka ee internetka. Wales, ganacsadaha dhaqaalaha, iyo ganacsadaha ayaa iskaashi la sameeyay Larry Sanger, falsafada Ph.D., bogga internetka iyo kobcinta Nupedia, oo ah internetka xorta ah. Wales waxay ku tiirsan tahay tabarucaadyadii waayeelka iyada oo kor u qaadeysa Nupedia waxayna soo bandhigtay mawduucyo kala duwan. Nupedia waxay bixisaa ururin ballaadhan, laakiin kaliya qodobka 13aad ee mawduucyada sida Virgil iyo dhaqanka Donegal ayaa diyaar u ah dadka isticmaala. Taas bedelkeeda, Wales iyo Sanger waxay rajaynayaan in Wikipedia yahay ilaha kaliya ee ay isticmaalayaashu ku heli karaan macluumaad badan, waxayna si sahal ah u abuuri doonaan maqaallo cusub oo khubarada iyo cilmi-baaristu ay jeclaan doonaan.